Torohevitra mahasoa avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hanakanana ny mailaka tsy fantatra amin'ny kaonty Gmail
Mety haharikoriko ny fandefasana mailaka tsy alaina sy ny fialan-tsasatra ao amin'ny kaontinao Gmail. Gmail dia nanolotra filisty mahomby mba hisorohana ny mailaka mailaka avy amin'ny lisitry ny mailaka malaky sy ny mpanolotra manokana. Raha naharay mailaka mailaka ianao, dia manamaivana azy ny Gmail mba hanakanana ny mailogail amin'ny sehatr'asa maharitra.
Milaza i Ross Barber, manam-pahaizana Semalt , fa tamin'ny taona lasa, nampiasa mailaka maimaim-poana ireo mpampiasa sy mpanafika mba hangalatra ny fampahalalana avy amin'ny solosaina farany amin'ny mpampiasa. Raha tsindrio an-tsoratra mailaka amin'ny kaonty Gmail ianao, dia azo alefa mankany amin'ny tranonkala malaza iray izay ahafahan'ny hackers haingana haingana ny fampahalalana ara-bola sy ny tenimiafinao. Amin'ny fotoana maharitra, ny spammers dia manome vola tena karama ho azy ireo amin'ny fikambanana ho toy ny dokam-barotra. Ny mailaka tsy ilaina dia tsy voatery ho olana lehibe amin'ny fampielezan-kevitra an-tserasera na ataonao. Alefaso kely fotsiny ny mailaka fandefasan-tserasera amin'ny alalan'ny fampihenana ny isan'ireo mailaka tsy nalefa nalefa any amin'ny kaontinao.
Ahoana no hanakanana ireo mpampiasa ao amin'ny kaonty Gmail amin'ny fampiasana sivana spam
Raha te hisoroka mailaka mailaka avy amin'ny kaonty Gmail ianao, ny fampiasana solosaina spam dia tokony ho vahaolana voalohany hiheveranao azy. Ireo sivana spam dia mamaritra hoe avy aiza ny ankamaroan'ny imailaka tsy fantatra, avy amin'ny teknolojian'ny mailaka, ny sora-baventy voarakitra amin'ny mailaka, ary ny isan'ireo olona nahazo ny mailaka tsy nahaliana.
Hanakana ny mailaka mampiahiahy sy fambara avy amin'ny mpanolotra manokana tsy hiditra amin'ny kaonty Gmail anao, ampio ny mpanolotra amin'ny lisitry ny sakana Gmail. Aorian'ny alalana tsy alefa email, tsindrio ary tsindrio ny 'arrow down 'aseho eo amin'ny zoro ambony farany amin'ny mailaka diso.
Fidio ireo safidy naseho rehefa avy mifidy ny zana-tsipika ambany ary tsindrio ny safidy 'Block Sender'. Amin'ny hoavy, ny mailaka tsy fantatra rehetra avy amin'ny mpandefa sakana dia alefa any amin'ny 'junk' folder. Soa ihany, Gmail manome anao ny fahafahana hamongorana ireo sendikan'ireo izay tsy voasakana.
Tricks momba ny fomba fitaterana mailaka spam
Rehefa mahita mailaka amin'ny mailaka ianao ao amin'ny kaonty Gmail dia tsy voatery hisavorovoro ianao. Tsindrio ny mari-tsoratra hita ao amin'ny lisitry ny mailaka na fampiasana filtres manolotra ny vahaolana tsara indrindra. Google dia mampiasa ny tatitra napetrak'ireo mpampiasa farany mba hanatsarana ny sivana spam ary hanatsara kokoa izany. Ny filaharan'ireo spam dia manome ny vokatra tsara indrindra hatramin'izay. Na dia izany aza, mailaka fandefasan-tserasera sasantsasany ihany no mahita fomba iray hahatongavana amin'ny kaonty Gmail. Raha te-mandefa mailaka mailaka voarakitra ao amin'ny kaontinao dia tsindrio ny 'arrow nidina' naseho teo an-tampon'ny haba voalazan'ny mailaka.
Soraty eo amin'ny lisitry ny safidy voarakitra ao amin'ny bokotra efajoro ary tsindrio ny safidin-tsakafo 'Manorata spam'. Rehefa avy nanamarika na nitatitra hafatra sy mailaka dia nalefa any amin'ny 'junk folder' ny votoatiny. Tohizo ny fanakanana sy ny fanaovana tatitra tsy mitongilana amin'ny Gmail ary manamaivana ny isan'ny tahirin-junk nalefan'ireo mpitsoka sy mpanafika anao.
Gmail dia tena matotra tokoa ny fiarovana ny kaonty Gmail anao. Aza avela handrava ny tahirin-tsetroka sy ny mailaka tsy fantatra ny solosainao. Aza avela mandefa mailaka amin'ny mailaka manokana amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo any amin'ny lisitry ny lisitrao. Ireo mpanolotra tsy manakana eo amin'ny lisitry ny sakana dia tsy azo atao amin'ny alàlan'ny tsindrio ny 'pile down' ary tsindrio ny safidy 'unblock' Source .